Location: Mbido » Ịdee » Obodo | Mpaghara » USA » Lụọ ọgụ ike site na iwepụta oge iji hazie ezumike gị
Ọtụtụ puku ndị otu na-eme njem na United States na-egosipụta atụmatụ mba ụwa maka ụbọchị ezumike kwa afọ (NPVD) na Jenụwarị 25 iji gbaa ndị America ume ịhazi oge ezumike ha niile maka afọ na mmalite nke afọ.
Mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ nke nrụgide metụtara ọrịa na-efe efe, ndị ọrụ America na-agba ọkụ-na data ọhụrụ gosipụtara ya.
Iji nyere aka agha oké ike ọgwụgwụ na kpalie America na-ụfọdụ nke ukwuu-mkpa ezumike, ọtụtụ puku njem òtù gburugburu United States na-egosipụta kwa afọ Atụmatụ mba maka ụbọchị ezumike (NPVD) na Jenụwarị 25 iji gbaa ndị America ume ịhazi oge ezumike ha niile maka afọ na mmalite nke afọ.
Ihe karịrị ụzọ abụọ n'ụzọ atọ (68%) nke ndị ọrụ America na-eche na ọ dịkarịa ala na-ere ọkụ na 13% na-agbachapụ nke ukwuu. Ọzọkwa, ihe karịrị ọkara (53%) nke ndị ọrụ dịpụrụ adịpụ na-arụ ọrụ awa ugbu a karịa ka ha nọ n'ọfịs yana 61% na-esiri ya ike iwepụ ọrụ na ezumike.
N'agbanyeghị ọgba aghara kachasị ọhụrụ nke ọrịa na-efe efe, data sitere na ebe nyocha na-achọpụta na ihe ka ọtụtụ n'ime ndị America gbara ajụjụ ọnụ nọ 'njikere ime njem'' ma na-achọsi ike ịhazi njem:
81% nke ndị America nwere obi ụtọ ịhazi ezumike n'ime ọnwa isii na-abịa
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isii n'ime 10 (59%) kwenyere na njem dị mkpa karịa mgbe ọ bụla yana atụmatụ 61% iji mee njem bụ ihe kacha mkpa na mmefu ego na 2022
Mere eme, NPVD e bu n'obi nyere aka dozie nsogbu nke ndị America na-ejighị oge niile ha nwetara ezumike kwa afọ, agbanyeghị, ihe ịma aka nke ọrịa a enyela. NPVD ọhụrụ pụtara: oge ​​ịhazi n'ihu maka ụbọchị ndị na-egbukepụ egbukepụ na iwepụ na nrụgide nke ndụ kwa ụbọchị.
Mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ biri na ọrịa a, ndị America nwere nnukwu mkpa maka nrụpụta nke ezumike na-enye, n'agbanyeghị nso ma ọ bụ dị anya ọ ga-ewe gị. Atụmatụ mba maka ụbọchị ezumike bụ ohere zuru oke iji soro ezinụlọ na ndị enyi na-anọdụ ala ma mee atụmatụ maka oge ezumike dị oke mkpa maka afọ ndị ọzọ.
Ọbụna omume dị mfe nke ịhazi ezumike nwere ike inyere aka ịchụpụ blues oyi. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ atọ n'ụzọ anọ (74%) nke ndị nhazi kwuru na ha nwere oke ma ọ bụ nwee obi ụtọ na-atụ anya ma na-eme atụmatụ ezumike maka afọ na-abịa karịa naanị anọ n'ime 10 nke ndị na-abụghị ndị nhazi.
Otú ọ dị, ihe mgbochi ndị metụtara ọrụ-dị ka ibu ọrụ dị arọ na ụkọ ndị ọrụ-bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị bụ isi na-egbochi ndị America iji oge ezumike ha mee ihe.
A ga-akpado ọdịnaya mgbasa ozi ọha maka atụmatụ mba maka ụbọchị ezumike site na iji # Atụmatụ maka ezumike.